बचतको बानी बसाल्न आई एम एमबीए एपले सहयोग गर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता बचतको बानी बसाल्न आई एम एमबीए एपले सहयोग गर्छ
अन्तरवार्ता 10 views
बचतको बानी बसाल्न आई एम एमबीए एपले सहयोग गर्छ
हालै गुडविल फाइनान्स लिमिटेडको २३औं वार्षिक साधारणसभाले १० दशमलव १२९ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको छ । यो बोनस शेयर वितरणपश्चात् कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८० करोड पुग्नेछ । हाल १२ स्थानबाट सेवा तथा सुविधा दिँदै आएको गुडविलले ३ ओटा शाखा विस्तार गर्ने भएको छ । बैङ्कले सर्वसाधारणलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्न भर्खरै ‘आई एम माष्टर अफ बचत एण्ड आर्जन (एमबीए)’ नामको अभियान थालेको छ । यसको पुस्तक र मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएका छन् । यो अभियानका साथै कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग अभियान संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानी :
२३ वर्षअघि शुरू भएको गुडविल फाइनान्सले हालसम्म कस्ता मुख्य उपलब्धि हासिल गर्‍यो ?
‘फाइनान्सिङ फर सक्सेस सिन्स १९९५’ भन्ने नाराअनुसार काम गर्दै आएको गुडविलको उद्देश्य भनेको हामी र हाम्रा सेवाग्राही दुवै पक्षलाई हित हुनुपर्‍यो भन्ने हो । यसरी सबै पक्षको सफलतालाई गुडविल फाइनान्सले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले ‘फाइनान्सिङ फर सक्सेस’ भन्ने नारा राखेका हौं भने ‘सिन्स १९९५’ भनेर राख्नुको उद्देश्यचाहिँ हामी यति वर्ष पुरानो भयौं भनेर इङ्गित गर्न हो । बैङ्किङ उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको एउटा पुस्ताले मात्र गर्ने हैन । एउटा पुस्ताले शुरू गर्छ र निरन्तर पुस्तौं पुस्तासम्म जानुपर्छ । यही आशयले हामीले ‘सिन्स १९९५’ भनेको हो ।
यो कम्पनी शुरू गर्दा पूँजी जम्मा रू. १ करोड २५ लाख थियो । २३औं वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रो पूँजी रू. ८० करोड पुगेको छ । पूँजी वृद्धिको हिसाबमा हेर्दा पनि हामीले ठूलै फड्को मार्न सकेको जस्तो लाग्छ । कम्पनीको समग्र कारोबार पनि रू. ६ अर्ब नाघिसकेको छ । तर यो उपलब्धि नै हाम्रो उद्देश्य भन्नेचाहिँ हैन । हामीले योभन्दा अझै बढी गर्नुपर्नेछ । यो वर्ष पूँजी बढेकाले आगामी २ वर्ष अझ बढी दुःख गर्नुपर्नेछ । हाम्रो क्षमताको उपयोग अहिले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । यो करीब ७० देखि ८० प्रतिशत नभएसम्म हामीले लगानीकर्तालाई जति नाफा दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्तैन । वित्त कम्पनीले गर्ने आम्दानी भनेको शुद्ध ब्याज आम्दानी मात्र हो । त्यसैले हामीलाई आफ्नो क्षमताको उपयोग उच्च बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार गुडविल फाइनान्सको नाफा रू. १ करोड २० लाख छ । गतवर्षको तुलनामा यो १ प्रतिशत मात्र वृद्धि हो । किन यस्तो ?
पहिलो त्रैमासको नाफा निश्चय पनि कम हो । गतवर्षको तुलनामा चुक्तापूँजी निकै वृद्धि गर्नुपरेकोले नाफा तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन । गुडविलको पहिलादेखिकै कारोबारलाई हेर्ने हो भने जहिले पनि पहिलो त्रैमासमा खासै प्रगति देखिँदैन । तेस्रो त्रैमाससम्म पुग्दा भने प्रगति देखिन्छ । तर, यस वर्ष भने अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै नाफा कमाउन गुडविल सफल हुन्छ भन्ने अवस्था अहिले नै छैन । कारण के भने गतवर्ष पनि बजारमा तरलता कम भएकाले ब्याज खर्च बढी भयो ।
यस वर्ष पनि अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचतमा दिन्छु भनेर सार्वजनिक सूचनामा ल्याएको ब्याजदरले फेरि सबैको ब्याज खर्च नबढ्ला भन्न सकिन्न । अहिले जुन हिसाबमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बचतमा ब्याज निर्धारण गरेका छन्, त्यसको हिसाबमा कर्जा पनि ब्याज बढाएर दिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुन मूल्यमा निक्षेपमा ब्याज दिन खोजेका छन्, त्यही मूल्यमा बजारमा कर्जा पाउने अवस्था छ । त्यसैले जबसम्म यो अवस्था हट्दैन तबसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थिर हुन सक्दैनन् ।
यो अवस्था आउने विभिन्न कारणहरू छन् । त्यसमध्येमा एउटा कारण हो, गतवर्ष यसै समयमा तरलता कमी भएकाले सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज बढाएर निक्षेप सङ्कलन गर्नु । त्यसको असर अब देखिन्छ, किनभने त्यो बचत अब परिपक्व हुँदै छ । बचतकर्तालाई उसको पैसा फिर्ता दिन पर्योु । त्यसका लागि अरूसँग बचत लिनुप¥यो । त्यसरी बचत ल्याउन ब्याजदर बढाउनु पर्योफ । त्यसको साथै यस वर्षको राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन के छ भने कसैले मसँग बचत छ, त्यो रकम बैङ्कमा राख्न चाहन्छु, कुन बैङ्कले कति ब्याज दिन्छौं, बोलकबोल गर भन्यो भने सम्बन्धित बैङ्कले आफूले सार्वजनिक गरिराखेको ब्याजदरभन्दा बढीमा २ प्रतिशत मात्र बढाएर बोली लगाउन पाउँछ । पहिला सार्वजनिक गरिएको ब्याजदर ८ प्रतिशत हुन्थ्यो, तब ठूला लगानीकर्ताको पैसा लिन १३ प्रतिशतसम्म पनि बोली लगाइन्थ्यो । तर, आजको दिनमा सबै बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर नै निकै बढी छ । त्यसमा २ प्रतिशतमात्र बढाउँदा पनि निकै हुन्छ ।
गतवर्ष यही समयमा तरलता अभाव भएको थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिन लागेको हो त ?
एउटा संस्थाले आफ्नो फण्ड कतातिर जान्छ, कति फण्डचाहिँ मैले परिपक्व भएको अवस्थामा नवीकरण गर्न सक्छु, कुन रेटमा नवीकरण गर्न सक्छु भन्ने कुराको विश्लेषण गरेन भने यो समस्या आउने हो । अहिले गतवर्षको तुलनामा धेरैले ब्याजदर बढाएका छैनन् । कतिपय वाणिज्य बैङ्कहरूको ११ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । हामीचाहिँ अहिलेसम्म १० दशमलव ५ प्रतिशतमै छौं । यही अवस्था भयो भने ब्याजदर सबैको बढ्ने अवस्था छ ।
तरलतामा भएको उतारचढावसँगै ब्याजदरमा परेकोे चाप अहिले कस्तो छ ?
तरलतामा अहिले आएको उतारचढावअनुसार ब्याजदर झण्डै झण्डै गतवर्षकै अवस्थामा आउने देखिन्छ । बैङ्कहरूले आफूले बढाएको ब्याजदर ठीक छ या छैन, ब्याज बढाएको कारण निक्षेप बढ्छ कि बढ्दैन, यसमा पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ । आफूले लिएको निक्षेप अरू ठाउँमा दिने अझ बढी ब्याजले गर्दा अन्तै जान दिन थाल्यो भने त्यसपछि त्यही निक्षेपमा अझ बढी ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई अहिले नै विचार गरेन भने गतवर्षको जस्तै समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।
राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
गतवर्ष ट्रेजरी बिलमा १ प्रतिशतभन्दा कम रिटर्न आउँथ्यो । यही ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधिका कारण यस वर्ष यसमा वृद्धि भएको छ । तर, अब हेर्नुपर्ने चाहिँ यही कार्यविधिले कर्जाको ब्याजदर तल झर्छ कि झर्दैन, त्यो हो । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग भएको फण्डमा रिटर्न त बढी दिलाउने भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर घट्छ कि घट्दैन त्यो चाहिँ यस वर्षबाट देखिनेछ ।
पूँजी वृद्धि भएसँगै कम्पनीलाई प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलनमा राख्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । यो अवधिमा पूँजी ६० प्रतिशत वृद्धि भएकोे छ भने प्रतिशेयर आम्दानी (खुद मुनाफालाई जम्मा शेयरले भाग गरी त्यसको वार्षिकीकरण गर्दा) १० दशमलव ५४ रुपैयाँबाट घटेर ६ दशमलव ६५ रुपैयाँमा आएको छ । यसलाई पहिलाकै तहमा पुर्यालउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कम्पनीको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विषय भनेकै पहिलाकै स्तरमा प्रतिशेयर आम्दानी कायम गर्न सकिएला कि नसकिएला भन्ने नै हो । लगानीकर्ताहरूले आजको दिनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कम्पनीले जसरी अहिले पूँजी बढाएको छ, त्यो भनेको नयाँ कम्पनी खोले जस्तै हो । यो बढेको पूँजीबाट नयाँ कम्पनी खोल्दा त्यसले नाफा कमाउन समय लाग्छ नै । त्यस बीचको जति समय हुन्छ नि त्यति नै समय अहिलेको कम्पनीलाई पनि दिनुपर्छ । पूँजी २ वर्षमा ४ गुणा बढेपछि नाफा ४ गुणा बढ्न समय लाग्छ । नाफा ४ गुणा बढ्न चाहिने अवधिअगावै प्रतिशेयर आम्दानी पहिलेकै स्तरमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न भयो भने त्यसले समग्र फाइनान्स सिष्टममै समस्या गराउन सक्छ ।
गुडविलले भर्खरै बजारमा ल्याएको ‘आई एम माष्टर अफ बचत एण्ड आर्जन’ एप्लिकेशनको विशेषता के हो ? यसबाट ग्राहकले कसरी लाभ लिन सक्छन् ?
यो एउटा एप मात्र होइन, यो गुडविल फाइनान्सको सामाजिक पहल पनि हो । यसमा हामीले गर्न खोजेको के हो भने बच्चादेखि नै बचत गर्ने बानीको विकास होस् । यसरी बचत गरेर राखेको पैसालाई घरमा नराखी बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राख्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन गर्ने हो । यो पैसा गुडविलमै राख्नुपर्छ भनेको होइन । त्यो बैङ्किङ प्रणालीमा जाओस् र त्यसले पूँजी जम्मा होस् । किन बैङ्कमै बचत गर्नुपर्छ ? त्यस विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्य हो ।
स्कुल तहबाट नै बचत गरी जम्मा भएको रकमले उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि केही काम शुरू गर्न सकियोस् भन्ने हो । यस्तो बचत रकमले उद्यमशीलतामा सहयोग गरोस् । यस्तो बचत आफ्नो खाजा खर्चबाट कटाएर पनि गर्न सकिन्छ । यो देख्दा सानो बचत हो, तर लामो समयपछि यसको ठूलो रूप देख्न सकिन्छ । यस प्रकारको जनचेतना फैलाउन यो कार्यक्रम शुरू गरेको हो । यसका लागि हामीले किताब पनि सार्वजनिक गरेका छौं । यस किताबमा किन बचत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही कथाहरू पनि समेटिएका छन् । आजभोलि नगद कारोबार कम हुँदै गएको छ । दीर्घकालमा इण्टरनेट बैङ्किङ र मोबाइल बैङ्किङसँग जोडेर काम गर्ने योजनासहित यो एप पनि ल्याइएको हो ।
यसलाई हामीले देशभर सञ्चालन गर्ने होइन र गर्न पनि सम्भव छैन । जहाँ हाम्रो शाखा छ, त्यहाँका लागि हो । अहिले १२ ओटा शाखा सञ्चालनमा छन् । साथै, यस वर्ष ३ वटा शाखा थपिँदै छन् । हाम्रो शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् । विद्यार्थीलाई एउटा राम्रो उद्यमी बन्न आवश्यक कुरा र बैङ्किङको बारेमा जानकारी दिनका लागि यसले सहयोग गर्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुल नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । गुडविलले हरेक वर्ष यससँग सम्बन्धित के कस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ ?
राष्ट्र बैङ्कले यो अनिवार्य गर्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू गर्दै आएका छौं । विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएका छौं । प्लस टुसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिलाएका छौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न रुचि भएकाहरूलाई ट्रेनी तथा इण्टर्नको रूपमा पनि संस्थामा लिएका छौं । उपत्यकामा हुने विभिन्न जात्राहरूमा सहभागी भएर पनि काम गरिरहेका छौं । भूकम्पबाट भत्किएको काष्ठमण्डप पहिले कस्तो थियो भनेर होलोग्राम बनाएर काठमाडौं नगरपालिकालाई दिइसकेका छौं र ठाउँ उपलब्ध भएमा छिटै राख्नेछौं । भरसक हनुमान्ढोका परिसरमा राख्न खोजेका छौं । यसले पुरानो काष्ठमण्डपको संरचनालाई होलोग्राममा भए पनि जीवित राख्नेछ र सबैलाई जानकारी दिनेछ । यसबाहेक यसले पुराताŒिवक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरू छिटो निर्माण गर्न सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ ।
पछिल्लो समय सफ्टवेयर, एटीएम ह्याक गर्ने समस्या बढेको छ । कसरी सावधानी तथा सतर्कता अपनाउनु भएको छ ?
सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामी आफै अझै पूर्ण सन्तुष्ट नभइसकेकाले अहिलेसम्म हामीले एटीएम राखेका छैनौं । यसै वर्षबाट राख्ने तयारीमा छौं । आफूले आफैलाई सुरक्षित कसरी बनाउने भनेर सोचिएको हुन्छ र हामीले पनि सफ्टवेयरलाई सुरक्षित बनाएका छौं । हाम्रो सिष्टम डाउन भएको १ घण्टामा नै फेरि सुचारु हुन्छ । यसरी हामीले सफ्टवेयरको ब्याकअपको पनि राम्रो व्यवस्था गरेका छौं ।
पहिला हरेक वर्ष जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिकाको एक खण्डमा जोखीम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले यसपालि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेर पहिलाका सबै व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । यसको परिपालनमा गुडविलका योजना के छन् ? यसमा केही समस्या देख्नुभएको छ ?
राष्ट्र बैङ्कले तरलता, व्यवस्थापनलगायतका जोखीममा यतिसम्म बस्ने भनेर सीमा तोकिदिएको छ । उक्त सीमालाई नाघ्ने गरी काम गरेमात्र समस्यामा परिन्छ । जसअन्तर्गत कर्जा र पूँजी तथा निक्षेपको (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशतसम्म बस्दा जोखीम हुँदैन, तर यो प्रतिशत बढ्न थाल्यो भने समस्या पर्न जान्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बैङ्कको आन्तरिक कुरा हो । ८० प्रतिशतको सीसीडीमा बस्नका लागि निक्षेपलाई दृष्टिगत गरिरहनुपर्छ । यदि सीसीडी ८० पुगिसकेको छ भने कुनै निक्षेपकर्ताले रकम झिकेर लैजानासाथ उक्त स्थान कतै न कतैबाट पूरा गर्न तयार रहनु पर्छ । नत्र भने एउटा निक्षेपकर्ता बाहिरिँदैमा सीसीडी नाघ्ने हो भने ७९ प्रतिशतमा राख्नुपर्छ । गुडविलको भने ७५ प्रतिशतको सीसीडी रेशियोमा बसेको छ । हामीले योभन्दा बढी नाघ्न दिएका छैनौं । यसैले हाम्रो प्राथमिकता नाफामूलकभन्दा पनि टिकाउमूलक हुने हो ।
भावी योजना केके छन् ?
नेपालको अवस्थामा भावी योजना यो गर्छु भनेर बस्ने अवस्था छैन । अब बल्ल स्थायी सरकार आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसपछि अर्थतन्त्रको दिशा निश्चित होला । अबको स्थायी सरकारले स्थायी नीति लिएमा हामीले बल्ल आफ्नो दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छौं । अहिलेकै अवस्थामा भने दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्न । जुनसुकै सरकार जतिसुकै अवधिको आए पनि उनीहरूको एजेण्डामा आर्थिक एजेण्डा मुख्य प्राथमिकतामा नपरेसम्म नेपालले फड्को मार्न सक्दैन ।
५ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:१६
सोच बदलौं, कार्यशैली बदलौं, विकास सम्भव छ
४ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:३६